Johane Chitsauko 10. Kukundikana kweHutungamiri hwevanhu muchitendero
» Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Johane Chitsauko 10. Kukundikana kweHutungamiri hwevanhu muchitendero
Johane Chitsauko 10. Kukundikana kweHutungamiri hwevanhu muchitendero
Vanhu havanzwisisi kufunga kwaMwari.
Saka kuti boka revanhu rigamuchire munhu mumwechete semutungamiri wavo, kana munhu anotungamirira iyeye asinganzwisisiwo zano raMwari kumazuva edu ano ekukanganisika mumafungiro, zvinenge zvisingarevi chinhu kugadzirira Kuuya kwaShe.
Munhu mumwe nemumwe anofanira kutsvaga hutungamiri hwaMwari uye kunzwisisa Magwaro kuzviitira iye.
Hakuna munhu anotungamirira anoziva kuti Kuda kwaMwari ndekwekutii pamusoro peumwe munhu. Munhu mumwe nemumwe anokwanisa chete kuwana ruzivo rwaizvozvo pachake. Mwari ega ndiye anokwanisa kudzidzisa munhu mumwe nemumwe chakavanzika ichocho.
VaFarise vaizviti vafudzi vevaIsraeri. Asi ...
Mufudzi wechokwadi mumwechete ndiMwari, kwete vanhu.
Simba raJesu rinoshamisa rakamuita mufudzi chaiye wevaIsraeri. Asi vaFarise vakamuramba zvakaoma vachida simba ravo uye mari yavo. Vaive vasina basa nekurwira maJuda hondo dzemweya. Havana kutsvaga kuti vaone kuti Magwaro akazadziswa naJesu aive api. Kubata pamusoro pemaJuda kwaiwanisa ivo pachavo. Kuzviunganidzira mari kwakavaita vafudzi vakaipa.
Vakatanga chimisikidzo chechitendero chaive pasi pehutongi hwekumanikidza kwemunhu. Paive pasina kusara mukana wekuti vanhu vatungamirirwe neMweya waMwari. Magwaro aive atsiviwa netsika dzevanhu.
Johane 10:1 Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Usingapindi nomukova mudanga ramakwai, asi unokwira nokumwe, imbavha negororo.
Vatungamiri vechiJuda vakabira maJuda kodzero dzavo dzekuziva Mwari. Havana kuparidza kubva muMagwaro, asi kubva kumazano avo ivo pachavo nekuturikira kwavo kwavanoda. Hunyengeri hwavo hwakanyengera vanhu kusvika pakutevera vatungamiri vechiJuda kwete Mwari. Izvi zvakabvisa meso avo paMagwaro.
Danieri 11:14 Nenguva idzo vazhinji vachamukira mambo wezasi; uye vana vavanopenga pakati pavanhu vako vachazvikudza, kuti vasimbise zvawakaratidzwa; asi vachaparadzwa
Vatungamiri vezvitendero vanodisa kwazvo kusimudzira kukosha kwavo ivo nekutaura kuti vanogona kutungamirira vanhu kuti vagadzirire kuuya kwaShe. Nekusimudzira kukosha kwavo ivo, vanoita kuti vanhu vakoshese vatungamiri pachinzvimbo chekukoshesa Jesu neShoko rakanyorwa muMagwaro.
Vanhu vanobva vabirwa ruwadzano rwakadzama rwuri pakati pavo naMwari pavanotya nekuterera vatungamiri vezvitendero.
Nhasi, maKristu mazhinji vanotsvaga “kuchengetedzeka” pakubvumira kwevatungamiri vezvitendero zvavo. Nekudzidziswa kuyemura nekutevera mutungamiri wekereke, vanhu vanoita sevanoguma vava vanongoenda kukereke asi vasina chavanoziva, zvisinei nekuti kune zvakawanda muBhaibheri zvavasinganzwisisi.
Havaone kusaziva Bhaibheri kunge dambudziko, nekuti vanofungidzira kuti kuchengetedzeka kwavo kuri “pakuenda kukereke” zvakanyanya. Vatungamiri vemakereke havanzwisisi Magwaro mazhinji acho ivo pachavo, uye vanogutsikana kufuratira kana kushandura kana kurwisa Magwaro pazvinovaitira.
“Kuenda kukereke” kutaura kusimo muMagwaro.
Asi Mwari paakauya kumaJuda, vaive vakuru vezvitendero vamwechete ava vakamuramba vakamisa vanhu kutevera Jesu. Nhorondo ichazvidzokorora mumazuva edu patinenge tichigadzirira Kuuya kwaShe.
Kune mukova mumwechete chete wekupinda Denga ndiro Bhaibheri Shoko rakanyorwa. Zvese zvatinoita nekutenda zvinofanira kuva zvichisimbiswa nekuyanana neMagwaro kuti titsigire zvatinotenda.
Chokwadi chinoziviswa nekuyananisa Magwaro muzvikamu zvakasiyana zveBhaibheri zvinotaura pamusoro penyaya yakasarudzika. Zaruriro yamunenge munayo inova chokwadi chete kana pasina Magwaro anorwisa pfungwa yenyu.
MABASA 14:27 Vakati vasvika, vakavunganidza kereke, vakarondedzera zvose zvakanga zvaitwa naMwari navo, vuye kuti wakanga azarurira vahedheni mukova wokutenda.
VAROMA 10:1 Naizvozvo kutenda kunovuya nokunzwa, nokunzwa kunovuya neshoko raMwari.
Kutenda kunobva paMagwaro.
Uyu ndiwo mukova wedenga watinofanira kupinda nawo kuti tigogona kupinda Denga.
Johane 10:2 Asi unopinda napamukova, ndiye mufudzi wamakwai
Jesu aizadzisa Magwaro. Ndiwo waive mukova wechokwadi wekutenda.
Muparidzi anofanira kuparidza kubva muMagwaro sezvo hushumiri hwake huripo kunongedzera vanhu kuMagwaro.
Tinofanira kutenda chinhu nekuti Bhaibheri rinotaura kudaro, kwete nekuti munhu ataura kudaro. Nenzira iyi tinenge tichitevera Jesu, nekuti ndiye Shoko.
Mwari Akavimbisa kuti achaita chimwe chinhu chisina kumbovonekwa paanozarura meso emapofu.
Aive asingazoshandiri muzvirongwa zvezvitendero zvechiJuda zvaive zvakutongwa nedzidziso dzakagadzirwa nekuitwa nevanhu.
Isaya 42:16 Mapofu ndichaafambisa nenzira yaasingazivi, pamakwara aasingazivi ndichatungamirira; rima ndichariita chiedza pamberi pavo, nezvakakombama ndichazviruramisa. Zvinhu izvi ndichazviita, handingavasiyi.
18 Inzwai, imi matsi; tarirai, imi mapofu, muone.
Ndicho chikonzero nei tisingafaniri kutevera hutungamiri hwevanhu. Mwari anofunga zvakasiyana nesu, vanhu vanotungamirira havazivi mafungiro aMwari. Saka mumwe nemumwe wedu anoda kutungamirirwa nekuratidzwa nzira naMwari.
Saka vanhu vanogona kukutungamirirai. Munhu anokwanisa kukurairai, asi haagoni kukuudzai zano raMwari raanaro kuhupenyu hwenyu. Zvatinogona kuita chete kuudzana pamusoro pechokwadi cheBhaibheri kuti tive nechokwadi chakaswatuka. Zvino zvinenge zvava kwamuri kuti musiye Mwari akutungamirirei.
Vanhu zvisinei vanodisa kwazvo kutevera boka. Kuita kweboka kunoreva kuti hatina basa nekuzvifungira. Tinenge tangova maKristu echinzvimbo chepiri sezvo tichitevedzera mienzaniso yevamwe, tichishingirira kufanana navo pachinzvimbo chekuva isu.
Kana ukatevera Jesu unoramba uri munhu akazvimiririra, nekuti hakuna munhu ari pakati pako naye.
Vanhu havagoni kuzarura masuwo ekutenda kuti vanhu vaone maonero emweya. Uye vanhu havagoni kuzarura meso akapofomara. Nei?
Kune mubatiri iye ega ndiye anogona kuzarura mukova. Mubatiri iyeye ndiMwari. Mwari anoterera Magwaro chete.
Mwari anotaura kwatiri neBhaibheri.
Nekuzarura meso ebofu, Jesu akaratidza izvi paakataura, Mwari mubatiri akaterera akazarura mukova kuti munhu aone. Izvi zvinoratidza kuti aigona kuita kuti Mwari azarure meso emweya kuchokwadi cheMagwaro.
Jesu anoziva mutendi mumwe nemumwe akazvimiririra.
Jesu haaponese kereke. Anoponesa munhu mumwe nemumwe akazvimiririra. Munhu mumwe nemumwe anofanira kuva neruwadzano rwakadzama naMwari akazvimiririra. Munhu mumwe nemumwe anofanira kutungamirirwa nekubatsirwa neMweya Mutsvene.
Kana Mweya waKristu ukatungamira, “Anovatungamiririra vachibuda” kubva mukereke nemazano nemafungiro ayo eboka netsika dzayo dzese.
Jesu Kristu ndiye anokwezva mutendi. Hakuna kereke, hakuna muparidzi anofanira kuuya pakati paJesu nemutendi.
Bhaibheri ndiro rinofanira kuva mubati mukuru pane zvese zvechokwadi. Bhaibheri ndiro rinofanira kuva mukuru wedu.
Nhasi “chichechi-chechi” nevanoenda kumakereke vakatsiva chiKristu. Kwane kusazvitsiura kukuru pamusoro pekutenda zvinhu zvisimo muBhaibheri.
“Izwi raMwari” ndiro Bhaibheri. Bhaibheri rinotiudza kuti toita sei uye kuti totenda mune zvipi. Zvikuru sei, Bhaibheri ndiJesu achitaura nesu.
2 Timotio 3:16 Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari, runobatsira pakudzidzisa, nokuraira, nokururamisa, nokuranga kuri mukururama,
Dzidziso ndiyo nheyo dzekubata kwesimba.
Marko 1:22 Vakashamiswa nedzidziso yake nokuti wakavadzidzisa sounesimba, asingaiti savanyori.
Kutsiura kunotiudza kuti taita zvakaipa. Kugadzirisa kunotwasudza kutenda kwedu kwakaipa.
Bhaibheri rine zvese zvatinoda kuti tive vatsvene. Saka Bhaibheri rakazara. Hatifaniri kuwedzera chiro, kushandura chiro, kana kubvisa chiro kubva kune zvakanyorwa.
Makwai haatevere mutungamiri wekereke. Makwai haatenderani nemafungiro kana netsika dzekereke.
Makwai ndivo vanhu vakazvimiririra vakatungamirirwa kubuda mukereke naJesu kuti vagone kutevera iye chete mukati memapeji eBhaibheri Shoko rakanyorwa.
Kana mukasataura kubva kuMagwaro, vatendi vechokwadi vanotiza kubva kwamuri.
Hosea 7:14 "Havana kudana kwandiri nemwoyo yavo, asi vanoungudza panhovo dzavo; vanounganira zviyo newaini itsva, vanondimukira.
Waini ndiko kusimudzwa kwezaruriro.
Asi zaruriro yavo kuShoko (mbeu) iripo kushandura Magwaro, kufuratira Magwaro, uye kurwisa Magwaro mune dzimwe nzvimbo. Vanhu vanoungana pamwechete mukereke kuti vaumbe zvitendero zvavo pachavo, pachinzvimbo chekutevera Magwaro zvakazara. Pakupedzisira vanoramba vaya vanoda havo kutevera Magwaro. Vanoungana pamwechete voguma vabvumirana muzvitendero zvavo pachavo.
Mutendi wechokwadi anotiza kuzvinhu zvese zvakadai kana pasita akangotaura chimwe chinhu chisimo muMagwaro.
Kutevera mukuru wangu itsika yemumasangano inozoita dambudziko renguva refu. Zvinoreva kuti munenge muchiisa munhu pakati penyu naMwari. Izvozvo zvakaipa. Munofanira kukoshesa Jesu zvakazara neBhaibheri Shoko rake.
MuTestamente Yekare, kwaive kusina munhu pamusoro pemuprista kunze kwemuprista mukuru.
MuTestamente Itsva, mutendi mumwe nemumwe muPrista.
1 Petro 2:9 Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, vuPirisita bwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira, kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai, kuti mubve parima muvuye kuchiedza chake chinoshamisa
Semuprista, munhu mumwechete ari pamusoro pako ndiye muPrista mukuru Jesu Kristu.
VAHEBERU 6:20 ... iye Jesu wakaitwa muPirisita mukuru nokusingaperi,wegwara reimba yaMekizedheki.
Saka hakuna munhu ari pamusoro pevatendi kunze kwaJesu.
Tinofanira kutenda kuBhaibheri chete. Muparidzi mumwe nemumwe anofanira kuparidza kubva muMagwaro chete.
Kuedza kuita kuti vanhu vatevere muparidzi kwakapedzisira kwaita kuti kutangwe masangano emakereke anosvika 45000 akasiyana zvaanotenda.
Pasita umwe neumwe anoshingirira kuita kuti kereke yake ive mumufananidzo wake.
Izvi zvinopedzisira zvava mufananidzo wechikara chekereke yeRoman Catholic yakatanga pfungwa yekuita munhu mumwechete anotonga kereke ari musoro wekereke. Iyi inzira yakakosha kuita chimisikidzo chechitendero. Asi zvinhu zvishoma kwazvo zvavanotenda zvinokwanisa kutsigirwa neMagwaro.
Zvakawanda zvinotendwa nemakereke asiri maCatholic hazvigoniwo kutsigirwa neMagwaro.
Asi mutendi weBhaibheri haaratidzi kufara muzvinhu netsika dzakaitwa nevanhu idzi, kana kuda kuzvitevera.
PaZuva reKutongwa tichatongwa neMagwaro kwete nezvakataurwa neumwe munhu.
Johane 10:6 Jesu akareva mufananidzo uyu kwavari, asi havana kunzwisisa, kuti zvaakavataurira ndezvei.
MaJuda haazivi zvazvinoreva kutevera magwaro zvakazara uye kutungamirirwa neMweya Mutsvene waKristu.
Nhasi kune Magwaro akawandisa asinganzwisiswi nevanoenda kumakereke.
Kufuratira Magwaro asinganzwisiswi kwakutambirwa kwazvo, semaJuda akafuratira zvaitaurwa naJesu nekuti vaive vasingamunzwisise. MaJuda havana kuziva kuti Mwari aiedza kutungamirira vanhu mumwe nemumwe kuti vabude muzvikamu zvezvechitendero zvaizviti zviri kubatira Mwari. Asi pachinzvimbo chekubatira Mwari, zvikamu izvi zvakakoshesa kusimudzira vanhu vaitungamirira kuitira kuti vanhu vauye vazvininipise kuvatungamiri vezvitendero ava.
Jesu ane dambudziko rimwechete nekereke nhasi sedambudziko raaive naro nemaJuda makore 2000 akadarika. Zvinhu izvi zvese zvinoitika seyambiro kwete kumaJuda enguva iyoyo chete, asi kuyambirawo “nhengo dzemakereke” (kutaura kusimo muMagwaro) anhasi.
Johane 10:7 Zvino Jesu akati kwavari zve: Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Ndini mukova wamakwai.
Zviverengo zvinoti “gumi” uye “nomwe” zvakakosha. Zvinomiririra mucherechedzo wezuva rekuyananisirwa.
Revitiko 16:29 "Unofanira kuva murayiro usingaperi kwamuri: Nomwedzi wechinomwe, nezuva regumi romwedzi, munofanira kuchema pamweya yenyu, nokusabata mabasa ose, kana ari munhu wakaberekerwa pakati penyu, kana ari mutorwa ugere pakati penyu;
30 Nokuti munofanira kuyananisirwa nezuva iro, kuti munatswe; munofanira kunatswa pazvivi zvenyu zvose pamberi paJEHOVA.
Jesu aifanira kukosheswa seMunhu mumwechete anogona kuyananisira zvivi zvedu.
Zvakazarurwa 1:6 Akatisunungura pazvivi zvedu neropa rake.
Hwamanda yemakore makumi mashanu yakaridzwa kusunungura vanhu kubva pahunhapwa kuvamwe vanhu.
Revitiko 25:9 Zvino pazuva regumi romwedzi wechinomwe unofanira kuraira kuti hwamanda iridzwe kwazvo; pazuva rokuyananisira munofanira kuraira kuti hwamanda iridzwe panyika yenyu yose.
10 Munofanira kutsaura gore ramakumi mashanu, mugoparidza sununguko panyika yose kuna vose vageremo; rinofanira kuva gore rejubheri kwamuri; munofanira kudzokera mumwe nomumwe kune zvake, munofanira kudzokera mumwe nomumwe kuhama dzake.
Jesu akauya kuzounza ruponeso kubva kuzvivi kuti tisunungurwe tigone kumutevera pasina munhu anenge achititungamirira. Vanhu vanokwanisa kutiraira nekutiudza zvinhu asi havafaniri kutarisira kuti tivatevere. Muparidzi anofanira kunongedzerera vanhu kunaJesu, Shoko, ova akangwarira kuti asatsive kana kuzviisa pachinzvimbo chaJesu. Mapasita anoda kuti vanhu vavatevere, akatopesana kare nekudanwa kwavo.
Johane 10:8 Vose vakanditangira kuvuya, imbavha namakororo, asi makwai haana kuvanzwa.
Vaparidzi vanofanira kuparidza zvinhu zvavanozogona kutsigira neBhaibheri chete. Chero chinhu chinopesana neBhaibheri chitendero chenhema.
Tinobatirira pakusaziva kwemakereke edu atinosarudza. Tinoguma tava netariro dzakarasika sezvo tisingatarisiri kunzwisisa Bhaibheri rese nekuti vatungamiri vemakereke edu havarinzwisisi. Saka vanhu vanofonyora chokwadi kuti chifambirane netarisiro dzavo.
Vatendi vechokwadi vanoramba chero uye mazano ese asingatsigirwi neShoko rakanyorwa.
Johane 10:9 Ndini mukova; kana munhu apinda neni, uchaponeswa, uchapinda, uchabuda, uchawana mafuro.
Kupinda nekubuda zvinhu zviviri zvinopikisana.
Kana tikatora dambudziko tikariisa mudura redu reminamato, rinobudamo rava simba kwatiri uye rashanda chakanaka kurutivi rwedu.
Nhamo dzinopfeka nguvo tema pakutanga, asi dzozobuda dzabereka moyo munyoro unonzwisisa pamapeto padzo.
Nhamo nemadzudzo ndizvo banga rinokwenenzvera mukombe unotakura mufaro wedu.
Jesu ndiye Mukova. Tinofanira kutanga tapinda nepaMukova tosangana neruwadzano uye zaruriro kumunhu mumwe nemumwe naye, saka Magwaro anobva atonga mafungiro edu. Tinofanira kutevera Jesu kupfurikidza kutevera zvatinotenda mumavhesi akasiyana-siyana eBhaibheri. Kuda kwedu kunoshaiwa basa kutadza kuonekwa. Tobva tabuda nepamukova tichikoshesa nekuratidzira Jesu neMagwaro kuvanhu vari kunze.
Tinopinda kunoninipiswa, tobuda tichikoshesa kusimudzwa kwake. Kukosha hakusi pamukuru wekereke. Kukosha kunofanira kuva panaJesu.
Muparidzi haagoni kudarika nepaMukova unova Jesu kana asingaoni Bhaibheri semukuru wake uye kana asina hunhu hwekuzvipira.
Hakuna munhu anokwanisa kutungamirira makwai. Munhu anokwanisa chete kunongedzera makwai kuShoko raMwari, Jesu.
Johane 10:10 Mbavha inongovuya, kuti ibe nokuvuraya nokuparadza. Ini ndakavuya, kuti ave novupenyu, vuye ave nobwakawanda.
Kutenda Magwaro ndiko kiyi yekugamuchira nayo Mweya Mutsvene, Hupenyu husingagumi.
Kutenda chero chinhu chisiri muMagwaro kunotungamirira kurufu chete.
Mweya Mutsvene unozivisa chokwadi chakavanzwa mumavhesi eBhaibheri.
Chero chinhu chakasiyana neMagwaro rufu runenge rwakashongedzwa nenzira yekunyengera.
Johane 10:11 Ndini mufudzi wakanaka; mufudzi wakanaka unorashira makwai ake vupenyu bwake.
Jesu ega ndiye Mufudzi wakanaka. Hakuna mumwe munhu. Jesu akatsigira chinhu ichi kupfurikidza kufira vanhu.
Johane 10:12 Muranda, usati ari mufudzi wamakwai, makwai asati ari ake, unovona bere richivuya, unosiya makwai, ndokutiza; bere rinoabata, nokuaparadzira;
Asi vaparidzi vekugadzwa kazhinji variko kuti vazviwanire kubva muEvangeri. Kana dambudziko rikauya, vanotizira kunotsvaga kuvanda. Kuparidza ibasa ravanototaura kuti vanoda muhoro wakakodzera. Hakusi kudanwa. Kana zvinhu zvikaipa vanobva vasiya basa iri. Kuchengetedzeka kwemakwai hakuna kuvakoshera.
Johane 10:13 Muranda unotiza: zvaari muranda haanehanya namakwai.
Murandawo zvake mushandiri anotengesa chipo chake kune anopa muripo wepamusoro-soro. Muranda mushandi anobva kuvurombo achitsvaga mafuro manyoro akapfuma; anobva kunzvimbo dzinonyanya kutyisa achienda kunzvimbo dzakachengetedzeka uye dzehutefe-tefe.
Vanozviona vari vepamusoro-soro pemakwai aripo kungovabatira. Zvinosuwisa, vangori vanhu pasina vane shungu dzekubudirira.
Kunze kwemutumwa wechinomwe Bhaibheri rinonyatsotaura nekuyambira kukuru pamusoro pevamwe vanhu vose munguva yedu yekupedzisira.
Mateo 23:13 Munenhamo, imi vanyori navaFarise, vanyengeri! Nokuti munopfigira vanhu vushe bwokudenga; nokuti imi hamupindi mumene, naivo, vopinda, hamuvatenderi kupinda.
Vatungamiri vezvitendero vanomisa vanhu kubva pakupinda nepaMukova weShoko rakanyorwa. Vanosiya Magwaro avasinganzwisisi vachiti haana maturo.
Vaparidzi vemumakereke nhasi vanofuratira zaruriro yeShoko rakanyorwa rinopokana nemafungiro avo, vosungirira vanhu pavari kuti vanhu vasasanganewo nechokwadi.
Johane 10:14 Ndini mufudzi wakanaka, ndinoziva makwai angu, namakwai angu anondiziva ini,
Kune mufudzi mumwechete chete akanaka, ndiJesu. Anoziva vanhu mumwe nemumwe wavo vanotora Bhaibheri “semukuru” wavo. Jesu ega anoziva kuti kuda kwaMwari ndekwei pamunhu mumwe nemumwe. Zvakadaro, vanhu mumwe nemumwe anowana kurudziro kubva kuShoko raMwari, kwete kubva pamazano nemafungiro echero mutungamiri wekereke.
Vanoona chokwadi mukutaura kwakanyorwa muBhaibheri chete.
Vatungamiri vemakereke vanofanira kunongedzerera vanhu kuMagwaro, kwete kumafungiro avo.
JOHANE 10:15 Baba sezvavanondiziva, saizvozvo nenivo ndinoziva Baba; ndinorashira makwai angu vupenyu bwangu.
Jesu, seMwanakomana waMwari, anoziva Mwari Baba vanogara maari. Mwari Baba vanoraira zvinoitwa neMunhu Jesu.
Jesu akaona chakaipa chichiuya akanosangana nekurwisa kwacho akachitarisa paCalvari. Akaramba kutiza kubva pakuipa kwemuchinjikwa. Kutongerwa rufu kwakaitwa pamusoro pechivi kwaizofanira kurova makwai ake, akakutakura iye papfudzi rake. Pachinzvimbo chekutiza kubva pakuipa uku, akaponesa makwai ake kubva pakuipa uku kupfurikidza kuzvipa sechipo chechibairo Iye pachake.
Jesu ndiMwari achizviratidza ari munhu.
Johane 10:16 Namamwe makwai ndinawo, asati ari edanga rino. Naiwo ndinofanira kuvuya nawo vo, achanzwa inzwi rangu; richava boka rimwe, nomufudzi mumwe.
Iri ivhesi rakadzama kwazvo. Rinoreva zviri kuitwa naJesu akatarisana nedambudziko rezuva rake, zvichashandawo kwatiri munguva inouya mukati memakore 2000 enhorondo yekereke. Mune imwe neimwe yenguva nomwe dzemakereke Jesu achatungamirira vanhu vake kuti vatevere chokwadi chinoziviswa kunguva yavo. Kutevera munhu mune chero nguva kunenge kusina maturo nekuti munhu iyeye achange asisipo panguva inotevera yekereke. Saka vaparidzi vakatumwa kuti vanongedzerere vanhu kuna Jesu, sezvo iye ega achave aripo munguva dzese dzemakereke.
Kana maKristu ari munguva imwe neimwe akatevera Jesu muruwadzano rwemunhu mumwe nemumwe naye, ndicho chinozova chinhu chinofananidza chinozobatanidza nguva dzese dzekereke nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinovawira.
Kutevera Jesu kunoreva kuti munotenda zvakaziviswa muBhaibheri.
Johane 10:17 Saka Baba vanondida, nokuti ndinorasha vupenyu bwangu, ndigobwutora zve.
Kuzvipira kwaJesu kutambudzika nekutifira kwakafadza Mwari aigara maari.
Mbeu inofanira kufa yovigwa muvhu isati yamera kuva mbeu inorarama. Saka Jesu, sembeu yeHupenyu Husingaperi, aifanira kufa omuka kubva kuvakafa asata apawo hupenyu husingagumi kunguva nomwe dzemakereke.
Johane 10:18 Hakuno munhu unganditorera ibwo; asi ndinobwurasha ndimene. Ndine simba rokubwurasha, vuye ndinesimba rokubwutora zve. Uyu murairo ndakaupiwa nababa vangu
Jesu haana kuuraiwa muzviitiko zvehutsinye. Akasarudza kuzvipira hupenyu hwake sechibairo kuti afire zvivi zvedu. Akasarudzawo kumuka kubva kuvakafa, kunyangwe zvazvo maRoma vaive vapfiga bwiro rake nekuririnda nguva dzose.
MAPISAREMA 16:10 Nokuti hamungasiyi mweya wangu muSheori; Hamungatenderi mutsvene wenyu kuti aone kuora.
Mwari akanyora chivimbiso chake muBhaibheri sechiprofita.
Saka Jesu aiziva kuti aisazopedza mazuva anodarika matatu ari mubwiro. (mumashure mekunge munhu afa kwemazuva matatu, kuvora kunopindira).
Simba redu rekuzadzisa Magwaro ndicho chivimbiso chete chatinacho chekuti Mwari anesu.
Johane 10:19 Ipapo kupesana kukamuka zve pakati pavaJuda pamusoro pamashoko iwayo.
MaJuda akapatsanurwa. Vamwe vaive vachitevera vaFarise vaifadzwa nekupomera Jesu chete.
Vamwe vaifadzwa kwazvo nezvishamiso uye kuparidza kwaJesu. Hakuna mumwe munhu kwavari aikwanisa kuenzaniswa naye.
Johane 10:20 Vazhinji vavo vakati: Unomweya wakaipa, unopenga; munomuterereiko?
Vatungamiri vezvitendero zvechiJuda vaishandisa kutaura kwakaipa kumunhu wese aivakurira. Vakapomera Jesu kuti aive wewakaipa. Havana kugona kutambira chinhu chekuti Jesu aive asingabvumirane nehutungamiri hwekereke.
Asi kupomera kwavo kwakazivisa kutadza kwavo.
VaRoma 2:1 Saka haunepembedzo iwe munhu, upi noupi, unotonga vamwe; nokuti pachinhu icho chaunotonga mumwe nacho, unozvipa mhosva iwe, nokuti iwe, unotonga unoita zvinhu izvozvo.
Saka vatungamiri vechiJuda vaive nemhosva yezvavaipomera Jesu. Kuramba Shoko rakauya kuzuva ravo kwakazivisa wakaipa aive mavari.
Vakatevera mienzaniso yaKaini yehumhondi sezvo rudo rwavo rwaingova pakuuraya Jesu.
Johane 10:21 Vamwe vakati: Mashoko awa haasati ari omunhu wakabatwa nomweya wakaipa; ko mweya wakaipa ungagona kusvinudza meso amapofu here?
MaJuda aive asingashandiswi nevatungamiri vezvitendero vakataura chinhu chaive pachena chekuti kana munhu akarurama akatadza kuita kuti mapofu aone, zvaisazogoneka kuti Diaborosi azviite.
Wakaipa, uyo chinangwa chake ndechekukonzeresa kutambudzika, angade kubvisa kutambudzika kubva kumumwe munhu here?
Johane 10:22 Yaiva nguva yomutambo wokuvandudzwa kwetembere paJerusarema; chaiva chando.
Mutambo wepagore waipembererwa kwemazuva masere waitanga zuva rechi25 remwedzi we Chislev (pakati pemwedzi waZvita pakarenda redu), rakagadzwa naMaccabaeus muna B.C. 164 achirangarira kunatswa kweTembere kubva pakusvibisa kwemutungamiri wemaGiriki wemuSiria, Antiochus Epiphanes.
Mutambo uyu waive usina kurebwa muMagwaro. Waive usina kunyorwa muTestamente Yekare.
Judas Maccabaeus aive mutungamiri wezvematongerwo enyika. Mazano ake aigamuchirwa seanobva kunaMwari, asi Mwari aive asina kutaura chero chinhu chakadaro. Mwari aive amira kutaura nevaIsraeri makore akapoteredza 400 BC apo muporofita wavo wekupedzisira, Maraki, akataura navo.
Mutambo uyu wakatangwa pakatanga maJuda kubva pamberi paMwari.
Kwaive kuratidzirwa kwezvaizova “Kisimusi” isina kunyorwa muMagwaro inoitwa munguva yechando yakaziviswa nekereke yeRoman Catholic musi wa25 Zvita muna 350 AD. Bhaibheri harina kubvira rati tipemberere kuzvarwa kwaJesu. Ichi chaive chikamu chezvitendero zvisimo muMagwaro zvaiziviswa kuvanhu nekereke yeRoman Catholic. Bhishopu akatanga kuiswa pakutonga zvinhu mukereke mumashure megore 100 AD muAntiokia. Pfungwa iyi yakapararira nekukasika ikapinda mune mamwe makereke. Mwari achibva ashandurwa kuitwa “Tiriniti: inotaurwa isina anonzwisisa nezvayo zvachose.
Kutaura kusimo muMagwaro kwakafanana nekwekuti “Mwari Mwanakomana”, “Mwari Mweya Mutsvene”, “Munhu wechipiri muhuMwari”, uye “Mwari Mumwe muvanhu vatatu” zvakatendwa mukereke mumashure mekanzuru yeNicaean muna 325 AD. Pakupedzisira, negore 606 AD Bhishopu weRoma aizotora simba pamusoro pemaBhishopu aive kunzvimbo dzekumadokero dzehushe hweRoma hwaiparara.
Asi Jesu aiziva kuti kereke yaiuya yaizozivisa zvitendero zvaive zvisina kunyorwa muMagwaro. Nenzira iyoyo vanhu vakabvisa meso avo paMagwaro (Jesu muShoko rakanyorwa) vakasarudza kutevera mazano evanhu neevatungamiri vemakereke. Hutungamiri hwevanhu hwaizoendesa kereke kuNguva yeRima.
Johane 10:23 Jesu akafamba mutembere pabiravira raSoromoni.
Mufananidzo uyu unoratidza Tembere muruvara rutsvuku, rwakakomberedzwa nenzvimbo yemuPrista. Zvino nzvimbo yeIsraeri kwaimira varume vechiJuda. Kwozotevera nzvimbo yevakadzi vechiJuda.
Kwaivewo nenzvimbo yemukati yaisatenderwa kupindwa nemaHedeni. Nzvimbo yevaHedeni yaive kunze kweNzvimbo yemukati. Zvino nzvimbo yaSoromoni yaive nzvimbo yekunze kunze yaive yakapoteredza chivakwa cheTembere. Yaive kunze kwechivakwa cheTembere neNzvimbo yevaHedeni asi ichiri mukati memudhuri mukuru waive wakapoteredza nzvimbo yakavakirwa Tembere.
Saka Jesu, seShoko, aive asiri muchivakwa cheTembere chaicho. Aive akabviswa akaiswa kure nechivakwa chetembere nepaaigona napo, asi ari mukati mechidziro chikuru chaive chakapoteredza chivakwa cheTembere.
Izvi zvinoratidza kuti vatungamiri vechitendero chechiJuda vairamba Shoko raMwari zvakadii (Jesu) vachimusairira kure navo nepavaigona napo pese. Asi aive Messiasi wavo, saka vaisagona kumubvisa, zvavaida kuita.
Mumwe mucherechedzo waive mutambo wenguva yechando wekunatsirwa kweTembere waive usiri chikamu chekutenda kweTestamente Yekare. Shoko raMwari raive richisairirwa parutivi apo vanhu vaitungamirira vaiwedzera zvavo vega kuShoko raMwari.
Shoko raisairirwa parutivi apo mirairo yevanhu yaitora nzvimbo.
Jesu seShoko, aifamba hake munzvimbo dzekunze kweruvazhe rweTembere. Paakafa paCalvari, Mwari akabvarura chidzitiro cheTembere sechiratidzo chekuti Mwari aive abuda muTembere zvachose.
Johane 10:24 Zvino vaJuda vakamukomba, vakati kwaari: Uchativetsa kusvikira riniko? Kana uri Kristu iwe, tivudze pachena.
Vaida kuti Jesu ataure kuti aive Messiasi. Kuti vamuuraire “kumhura Mwari”. Vaive vakapofomara zvekutadza kuona Magwaro aaive azadzisa.
Vaive vakazadzwawo nerudo rwerusununguko rwezvematongerwo enyika kubva kuRoma. Vaida Messiasi aizotungamirira hondo achirwisa maRoma. Kusanganisa chitendero nezvematongerwo enyika kunobereka kukanganisa kukuru.
Asi vanhu vazhinji vaive vanhuwo zvavo vakafadzwa nezvishamiso zvake. Vatungamiri vezvitendero zvisinei vaishungurudzwa kwazvo nekutya kurasikirwa nekukosha kwavo. Vaive nehupenyu hwehutefe-tefe muchimiro chechitendero chakaitwa nemazano evanhu saka vaive nezvizhinji zvekurasikirwa nazvo. Kuzvipira chaive chisiri chinhu chavaida.
Johane 10:25 Jesu akavapindura akati: Ndakakuvudzai, mukasatenda. Mabasa andinoita nezita rababa, ndiwo anondipupurira ini
Jesu akaita zvishamiso zvinosvika 42 muhushumiri hwake. Vatungamiri vezvitendero havana kana chavakaita. Asi havana kugona kutenda maari. Messiasi ega ndiye aizogona kuita zvishamiso izvozvo. Asi kana vakamugamuchira saMessiasi wavo, vaizorasikirwa nezvinzvimbo zvavo zvepamusoro nemihoro yakanakisa.
Jesu anotaura chokwadi pasina kunyenyeredza. Makwai ake anoziva Magwaro kana azadziswa.
Johane 10:27 Makwai angu anonzwa inzwi rangu; neni ndinoaziva, vuye anonditevera.
Makwai ake anoziva kuti Jesu ari kuzadzisa zvakaprofitwa muTestamente Yekare. Anoziva vanhu vake mumwe nemumwe uye anoziva kuti kuda kwaMwari kumunhu mumwe nemumwe ndekwei. Makwai ake anomutevera, nekuti ndiye Munhu ega ari kuita zvakataurwa neMagwaro kuti Messiasi aizoita.
Johane 10:28 Ndinoapa vupenyu bwusingaperi; haangafi nokusingaperi, vuye hakunomunhu ungaabvuta muruvoko rwangu.
Kana mukapa hupenyu hwenyu kuna Jesu, hakuna anokwanisa kukubvisai kubva paruchengetedzo rwake. Diaborosi angakuwisirai pasi asi haangakuitei kuti murambe muri pasi. Kuomerwa kunoita kuti mutendi akure, asingarasi tariro. Achifuratira marwadzo akadarika, achiona goho renguva refu rinouya.
Motto yavo ndeyekuti “chinangwa chezvese zvakakuomerai ndechekukuumbai nenzira inodiwa naMwari kuti muve”.
Kufa munyika hakusi nyaya nekuti kutevera Jesu zvinoreva kuti mukova unozaruka kwamuri kuti mupinde denga.
Johane 10:29 Baba vangu vakandipa iwo vakuru kunavose; hakuno munhu unogona kuabvuta muruvoko rwaBaba vangu.
Kutevera Jesu kunobereka mafungiro ekuti dutu rimwe nerimwe raunosangana naro chikoro, muedzo wese mudzidzisi, uye zvese zvawasangana nazvo idzidzo. Kutambudzika kwese kuriko kukukudza sezvo zvinangwa zvaMwari zvikuru kudarika marwadzo amunawo.
Jesu ane simba raMwari parutivi rwake. Mwari mukuru kudarika vamwe vanhu vose, kudarika mimwe mweya yese, kana wakaipa. Saka hakuna anogona kubviswa paruwoko rwaMwari.
Johane 10:30 Ini naBaba vangu tiri mumwe.
Jesu ndiye munhu wekunze. Mwari ndiye Mweya wemukati unorarama maari.
Muna Jesu tine mubatanidzwa wenyama nemweya.
Jesu naMwari Munhu mumwechete. Mwari akava Munhu akadaidzwa kuti Emanueri.
Johane 10:31 Zvino vaJuda vakanonga zve mabwe, kuti vamutake
Kutarisana naMessasi wavo pamuviri wenyama kwakakurira maJuda aya. Vakasarudza kumuvuraya. Kana vadaro vaizogara nezvinzvimbo zvavo zvakasimudzirwa munyika. Kutarisana neShoko raMwari kunoita kuti vatungamiri vezvitendero varambe chokwadi.
Johane 10:32 Jesu akavapindura, akati: Ndakakuratidzai mabasa mazhinji akanaka akabva kunaBaba; munonditakira basa ripiko kuna iwayo?
Mweya waMwari waive munaJesu waive waita zvishamiso zvakanaka zvakawanda. Kuporeswa kwevanorwara kwakaitika nzvimbo zhinji apo vanhu vazhinji vairwara kana kuti vaive vakazadzwa nemweya yakaipa. Ndechipi chishamiso chikuru chekuponesa chinoita kuti munhu afanire kutongerwa rufu?
Johane 10:33 VaJuda vakamupindura, vakati: Hatikutakiri basa rakanaka; asi nokuti wamhura Mwari; uye nokuti iwe munhu unozviita Mwari.
Zvino maJuda akaratidza ruvengo rwavo rwakaipa. Messiasi aizova Mwari mumuviri weMunhu. Asi Munhu anozvidaidza kuti Mwari aizouraiwa navo nekuti anenge amhura Mwari. Saka vaizoguma vauraya Messiasi wavo.
Johane 10:34 Jesu akavapindura, akati; Hazvina kunyorwa here mumurairo wenyu, zvichinzi: Ndakati: Muri vamwari?
MAPISAREMA 82:6 Ndakati, "Muri vamwari, Mose muri vanakomana voWokumusorosoro.
Isaya 41:23 Tiudzei zvinhu zvichazovapo pashure, tizive kuti muri vamwari; zvirokwazvo, itai zvakanaka, kana itai zvakaipa, kuti tishamiswe, tizvione tose pamwechete
Maprofita, vaiprofita zvichauya, vaidaidzwa kuti vamwari.
Johane 10:35 Zvino kana akavaidza vamwari, ivo shoko raMwari rakasvika kwavari, (Rugwaro harungaputswi);
Jesu aive ararama hupenyu hwaive hutsvene kudarika mamwe maprofita ese. Aive aita zvishamiso zvisina kubvira zvakaitwa nemamwe maprofita ese zvakaita sekufamba pamusoro pemvura nekupa vanhu 5000 chekudya kubva pambuva yemwanakomana.
Johane 10:36 Imi moti seiko kunaiye wakaitwa mutsvene naBaba, nokutumwa panyika: unomhura Mwari, zvandakati: Ndiri Mwanakomana waMwari?
Nzira imwechete iyo Jesu, semunhu, yaaizoita zvishamiso izvozvo yaive yekuva neMweya waMwari uchigara maari.
Johane 10:37 Asi kana ndisingaiti mabasa aBaba vangu, regai kunditenda ini;
Kana Jesu aisakwanisa kuita mabasa emweya waMwari, vaisazofanira kutenda maari.
Johane 10:38 Asi kana ndichiaita, kunyange musinganditendi ini, tendai mabasa, kuti mugoziva, kuti Baba vari mandiri, neni ndiri mavari.
Chero vaive vasingadi Jesu, kufunga kwakakwana kwaizovazivisa kuti Mwari ega ndiye aigona kuita zvishamiso izvozvo.
Mweya waMwari waive muna Jesu. Jesu aive muShoko raMwari nekuti akazadzisa Magwaro akataura pamusoro paMessiasi.
Johane 10:39 Zvino vakatsvaka zve kumubata, asi iye wakapukunyuka pamavoko avo.
Munguva yekusakwana vakatsvaga kumusunga. Asi vaishanda neMunhu aive abva kunzvimbo yekumusoro-soro. Aikwanisa kufamba munzvimbo dzavaive vasina chavanoziva nezvadzo.
Nekunyangarika achipinda munzvimbo yemweya yepamusoro, Jesu akaratidzira zvakare simba raMwari raive maari.
Johane 10:40 Zvino akaenda zve mhiri kwaJoridani, paya paibapatidza Johane pakutanga; akagarapo,
Nzvimbo iyoyo yaive Betania kurutivi rwemabvirazuva eJoridani.
Johane 1:28 Izvozvi zvakaitwa paBetania, mhiri kwaJoridani, kwaibapatidza Johane.
Joridani ndirwo rwizi rwunoyerera ruchinopinda muGungwa rakafa (the Dead Sea). Jesu aigadzirira kufa kwake. Pakupedzisira kwehushumiri hwake akadzoka kwaaive abapatidzirwa pakutanga.
Ndiye Afa naOmega, Kutanga nekuguma.
Mufananidzo uyu unoratidza Rwizi rweJoridani ruchiyerera kubva muGungwa reGarirea ruchipinda muGungwa rakafa (Dead Sea).
Betania zvinoreva kuti “nzvimbo yekuyambukira” yerwizi rweJoridani. Apa ndipo pakayambukira Joshua kuyambuka kwake kune mbiri paakapinda muNyika yeChipikirwa.
Saka Johane Mubapatidzi akabapatidzira ipapo nekuti aiziva kuti Murairo weTestamente Yekare “waizoyambukira” kupinda muNyasha dzeTestamente Itsva panosvika Messiasi.
Mosesi aimiririra Murairo. Akasiira Joshua anomiririra Mweya Mutsvene.
Jesu akadzoka panzvimbo iyi nekuti nguva yaive yakwana apo Kuyambukira kubva kumaJuda kuenda kuvaHedeni kwaizoitika pamuchinjikwa paCalvari. Izvi zvaizoitika nekuti maJuda vaizoramba nekuuraya Jesu, aive Messiasi.
Johane 10:41 Vazhinji vakavuya kwaari, vakati: Johane haana kuita chiratidzo, asi zvose zvakareva Johane pamusoro pomurume uyu ndezvazvokwadi.
Zviratidzo zvaifanira kuvakurudzira vese kuti vabvume kuti Jesu aive Messiasi.
Asi kwaive neavo vaitenda nekuda kwekupupura kwaJohane, uye Johane pachake aive asina chishamiso kana chiratidzo chaaive aita. Kugona kutenda pasina chishamiso kana chiratidzo chawaona ndiko kuedzwa kwechokwadi kwekutenda.
Johane 20:29 Jesu akati kwaari: Tomasi watenda, nokuti wandivona? Vakaropafadzwa vanotenda, kunyange vasina kuvona.
Asi vatungamiri vezvitendero zvechiJuda vakaona zviratidzo vakasatenda, vakaratidza kudzama kwekusatenda kunogona kunyura vatungamiri vezvitendero.
Johane 10:42 Vazhinji vakatenda kwaari ipapo.
Hakuna zvakanyorwa zvekuti Jesu akaita chishamiso kana chiratidzo paBetani. Asi vazhinji vakagona kutenda maari ipapo. Kure nekurudziro ine chefu yevatungamiri vezvitendero muJerusarema, vanhu vazhinji vakagona kutenda munaJesu.
Izvi zvinoratidza kuti vatungamiri vezvitendero vaive zvipingaidzo kudarika kuva vabatsiri.